ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: သိမှတ်စရာစကားလေးများ
ZOLZOL | 11:15 PM | ဗဟုသုတ
ZOLZOL | 11:15 PM |
A House is built of bricks and stones, A House is built of love alone.
အဆောက်အဦးတစ်လုံးကို အုတ်ခဲ၊ ကျောက်ခဲများဖြင့်တည်ဆောက်ကြသည်
မိသားစုနေအိမ်ကိုမူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်ဖြင့်သာ တည်ဆောက်ရပါသည်။
သိရီဂေဟာကို ဖန်တီးယူရသည်၊ ၀ယ်ယူ၍ မရပါ။
People usually are the happiest of home.William Shakespeare ( Playwright)
လူသားတို့သည် နေအိမ်တွင်သာအပျော်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ (၀ီလျှံ - ရှိတ်စပီးယား)
. Home is the most excellent place of all. Neil Diamond(Vocalist)
နေအိမ်ဆိုသည်မှာ ရှိရှိသမျှသောနေရာများအနက် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
(နီးလ် ဒိုင်းမွန်း - အဆိုတော်)
It takes hands to build house, but only hearts can buildahome.
နေအိမ်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင်မူ နှလုံးသား လိုအပ်သည်။
A man’s home may seem to be his castle from the outside, inside, it is more often his nursery.
လူတစ်ဦး၏ နေအိမ်သည် အပြင်ပန်းမှကြည့်လျှင် သူ၏ရဲတိုက်ဟုထင်ရသည်။
အတွင်း၌မူ သူ၏ပျိုးခင်း နှင့် ပို၍တူ၏။
Ah! There’s nothing like staying at home, for real comfort. Jane Austen (writer)
အား စစ်မှန်သော သက်သာရရှိစေရန်အတွက် အိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းသောအရာမရှိ။
ဂျိန်း - အော်စတင် ( စာရေးဆရာမ)
An empty house is likeabody from which life has departed.
ဘာမှ မရှိသောအိမ်အလွတ်သည် အသက်မရှိတော့သည့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တူ၏။
ရေးသားသူ ။။။။ ညချစ်သူ
Posted by ZOLZOL at 11:15 PM